Musoro weJobho: Content Writer |Nha yezvigaro: 1 |Nzvimbo: Gurgaon
Gadzira, udzike uye uchengetedze zvakanakisisa zvekufambisa zvakakanganiswa kwemasayiti, zvinyorwa uye blogs.
Innovatively kubata shanduro dzese dzevanhu.
Gadzira hurongwa hwakajeka hwemwedzi woga woga uye usangana nehupenyu hunogadziriswa mukati mekugadzirisa matanho.
Inofanira kunge iri mutambi webati
Kuchengetedza ruzivo uye tsanangudzo yekutsvakurudza kwezvinhu zvakagadzirwa.
Nguva dzose edza kuti uwedzere kunaka kwehupenyu hwehutano mumitambo yepakutanga.
Minimum 1 gore ruzivo muUnyora Kunyora.
Bachelor OR Masters Dhigiri muMisheni Kukurukurirana / Journalism /Shona (Hons)
Zvakanaka kurayira mutauro weChirungu uye kukwanisa kufunga nezve-ye-bhokisi, kutamba-ne-mazwi uye kunyora nenzira iri nyore, yakajeka uye yakarurama.
Ukana wekunyora zvinyorwa zvisingabatsiri uye zvisina kukanganisa kwemawebsite, zvinyorwa, mabhuku emashoko, mabhuku uye kubudiswa kwemashoko.
Kushushikana, Kuvimbika uye Simba
Iko kukanganisa kwekugadzirisa uye kuverenga-kuverenga kwehuwandu nehutano hwakanaka hwekutsvakurudza.
Kuzvidzivirira kune chido chokudzidza, zuva rimwe nerimwe
Mashoko Junkie uye Imaginative